सहरका रूखका दुःख- विचार - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १६, २०७८ साधना प्रतीक्षा
त्यस बेला पैदल यात्रु कहाँ हिँड्ने ? महानगरमा सडक विस्तार गर्न बर्सेनि घर तथा पसलहरू भत्काइन्छन्, यसै क्रममा मुस्किलले साना फुटपाथ बन्छन् । फुटपाथका स–साना बिरुवा रोप्ने बेला सुन्दर देखिन्छन्, केही समयपछि तिनका फिँजारिएका हाँगाबिगाले माथि टाँगिएका बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट र टेलिभिजनका तारमा अवरोध पुर्‍याउन थाल्छन् । त्यसपछि ती रूख काट्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । यसरी जथाभावी ठुन्क्याइएका रूखले महानगरको सौन्दर्यलाई उपहास गरेझैं लाग्छ ।
बिरुवा रोप्नु पर्यावरणीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले त विकसित मुलुकका सडक पेटीमा रूख रोपिएको हुन्छ । त्यहाँको हरियाली देखेर हामी पनि मोहित हुन्छौं । सायद यही मोहका कारण हाम्रो महानगरले पनि बिरुवा रोप्ने अभियानलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ तर ती मुलुकमा गरिने वृक्षरोपणबारे थप जान्ने प्रयास भने गरेको देखिँदैन । त्यहाँ कुन ठाउँमा कस्ता बिरुवा हुर्कन्छन्, तिनलाई कसरी काटछाँट गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिन्छ, सोअनुसार रोपिन्छ । साथै बोटबिरुवाको स्वास्थ्यका बारेमा पनि उनीहरू सचेत हुन्छन् । सडकवरिपरिका बोटबिरुवा हेर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाइएको हुन्छ । उतातिर नगर योजनाअन्तर्गत सडकछेउका निश्चित क्षेत्रफल हरियालीकै लागि छुट्याइएको हुन्छ ।
तर, हाम्रोमा यस्ता पक्षमा ध्यानै दिइन्न । यहाँको सहरीकरण अव्यवस्थित छ, घर धमाधम बनाउनु नै सहर बनाउनु हो भन्ने ठानियो । त्यसैले त हाम्रा सहरहरूमा बर्सेनि सडक चौडा पार्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सडक चौडा बनाउँदा घर जोगाउनै पर्‍यो, परिणामतः फुटपाथ सानो हुन पुग्छ । त्यसैमा पनि सौन्दर्य बढाउन भन्दै वृक्षरोपण अभियान चलाइन्छ, जसको आयु दुई–चार वर्षभन्दा बढी हुन्न । एकातिर ती बिरुवा हुर्कंदै गएर सडक तथा पसलहरूलाई बाधा पुर्‍याउँछन्, अर्कातिर हावाहुरी आएका बेला थप जोखिम पनि बढ्छ ।
हामीकहाँ अचेल वृक्षरोपण फेसनै बनेको छ । विभिन्न अवसर पारेर बिरुवा रोप्ने प्रतिस्पर्धा चल्छ, तर रोपिसकेपछि फर्केर पनि हेरिन्न । ती बिरुवा त्यसै मरेर जान्छन् । सार्वजनिक स्थल, सडक पेटी, विद्यालय प्रांगण, कलेज परिसर कतै पनि खाली जग्गा देख्नै हुन्न, वृक्षरोपण गरिहालिन्छ । त्यहाँका बिरुवा देख्दा, रोप्नेहरूलाई दुई बिरुवाबीच कति दूरी राख्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएजस्तो देखिन्छ । धान, मकै रोपेजस्तै बिरुवा रोपेर, उनीहरू मक्ख पर्दै जान्छन् र फर्केर पनि आउन्नन् । सायद, रूख रोप्ने बजेट हुने तर गोडमेल गर्नेचाहिँ नहुने भएर हो कि ? रूख रोप्नु सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको बजेट पचाउने माध्यम मात्र हो त ? अन्यथा यस सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान एवम् दीर्घकालीन सोच राखिएको देखिँदैन, किन ?
एक थरीले रूख रोप्दै जाने, केही समयपछि अर्का थरीले त्यसलाई काट्दै जाने त हाम्रो महानगरको विशेषतै बनेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले तार छुन लागेपछि रूख काट्दै हिँड्छ । दीर्घकालीन सोचबिना बिरुवा रोपिनाले रोप्दा पनि र काट्दा पनि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी पर्छ तर प्रतिफल शून्य । अनि अर्को पक्ष, जहाँ तार छोयो भनेर रूख काटिन्छन्, त्यहाँ पुनः बिरुवा रोपिएको देखिँदैन ।
महानगरमा रूख रोप्दा त्यससम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्छ । सडक पेटीमा कुन जातका बिरुवा रोप्ने, सडकबीचको ग्रिनबेल्टमा कस्ता बिरुवा हुर्काउँदा सवारी आवागमनमा बाधा पुग्दैन, रोपिएका बिरुवालाई कुन आकारप्रकारमा नियमित काटछाँट गर्ने आदि दीर्घकालीन योजना बनाएर मात्र बिरुवा रोप्नु प्रभावकारी हुन्छ । उद्यानहरूमा बिरुवा रोप्दा पनि सोहीअनुरूप दीर्घकालीन सोचको आवश्यकता पर्छ । यसका साथै बिरुवा हाम्रो माटो र हावापानी सुहाउँदो पनि हुनुपर्छ । सहर तथा उद्यानको सौन्दर्य बढाउन विदेशी महँगा बिरुवा रोपे तिनलाई हुर्काउन नसकेर लगानी खेर जाने गर्छ । प्रायः उद्यानमा यस प्रकारका बोटबिरुवा रोपिएका त हुन्छन् तर कालान्तरमा त्यसै हराएर जान्छन् । यस्तो हुन नदिन महानगरपालिकाले आफ्ना तर्फबाट सक्दो विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।
यसका साथै महानगरले सडकका पेटीहरू तथा सडकबीचमा वर, पीपल, शमी, कपूरजस्ता विशालकाय रूख रोप्ने अदूरदर्शिता पनि त्याग्नुपर्छ । साँघुरा फुटपाथलाई कसरी चुस्त बनाउने भन्ने सोचका साथ स–साना बिरुवा रोपेर तिनलाई नियमित काटछाँट गरेमा सडक पेटी सुरक्षित र सुन्दर बन्न सक्छन् ।
प्रकाशित : भाद्र १६, २०७८ ०७:२८
सुरुङ मार्गनजिक दिनैजसो पहिरो
वर्षा कम हुनासाथ प्रभावित स्थलको भौगर्भिक अध्ययन गरिने
माटो नजाँची विस्फोट गराउँदा पहिरोको समस्या आयो : जनप्रतिनिधि
पहिरोको रोकथाम छिट्टै हुन्छ, पीडितलाई पनि क्षतिपूर्ति दिन्छौं : आयोजना
भाद्र १६, २०७८ विमल खतिवडा
काठमाडौँ — नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग आयोजनाको धादिङतर्फको प्रवेशद्वार धुनीबेंसी–९ मा पानी पर्नासाथ पहिरो खस्ने गरेको छ । सिस्नेखोलास्थित खत्रीपौवा डाँडोबाट लेदो माटोसहितको पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ । झरिसकेको पहिरोलाई पालले छोपिएको भए पनि माथिबाट लेदो खसिरहेको छ ।
गत असारयता पानी पर्नासाथ यो खण्डमा पहिरो झर्ने गरेको धुनीबेंसी–९ का वडाध्यक्ष साइँला राईले बताए । पहिरोका कारण १२ घर जोखिममा छन् । तीमध्ये ६ घरलाई आयोजनाले कोठा भाडा बेहोरेर छुट्टै राखिदिएको छ । त्रिभुवन राजपथको नागढुंगा–नौबिसे सडकअन्तर्गत यो खण्ड भएर दिनहुँ ६ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्छन् ।
जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नै नदिई आयोजनाले काम गर्ने गरेको राईको दाबी छ । ‘आयोजनाले पहिला सुरुङमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिन र स्थानीयलाई मिलाउन सहयोग गरे पनि अहिले बेवास्ता गर्दै आएको छ,’ उनले भने । अहिलेको मुख्य चुनौती पहिरो रहेकाले नियन्त्रण गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । पहिरोले गर्दा सडक साँघुरो भएको छ । काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाका भएकाले पहिरो झरेपछि सवारी जाम पनि उत्तिकै हुने गरेको छ ।
गाउँबस्ती नै जोखिममा पर्ने खतरा भएपछि केही समयअघि धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सांसद, जनप्रतिनिधिलगायतको टोलीले पहिरोको अनुगमन गरी तत्काल संरक्षण गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘आयोजनासामु टोलीले पाँचबुँदे प्रस्ताव राखेको थियो,’ उनले भने, ‘डाँडा काटेर हुन्छ कि पालले छोपेर, तत्काल उक्त क्षेत्रको सुरक्षा हुनुपर्‍यो । अन्यथा खोला नजिकैका बस्ती र फाँट तहसनहस हुन सक्ने जोखिम औंल्याएका थियौं ।’ १२ घरको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिएको राईको भनाइ छ ।
‘जोखिममा परेका घरलाई मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्न भनेका थियौं,’ राईले भने, ‘आयोजनाले प्रस्ताव लग्छौं र समस्या समाधान गर्छौं भने पनि अहिलेसम्म दिगो समाधान हुन सकेको छैन ।’ सुरुङ निर्माणस्थल वरपरका डाँडाको माटो परीक्षण नै नगरी काम गर्दा यस्तो भएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘सुरुङ खन्ने ठाउँको माटो परीक्षण गरियो तर अहिले पहिरो खसेको डाँडाको गरिएन,’ उनले भने, ‘माटो परीक्षण नै नगरी विस्फोटन गराउँदा समस्या आएको हो कि ?’ २०७२ सालको भूकम्पले तहसनहस बनाएको जमिनमा विस्फोटको धक्काले समस्या निम्त्याएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसमाथि बर्खामा पानी पर्दा अर्को समस्या थपियो,’ राईले भने, ‘यसबारे आयोजनालाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं, सुनुवाइ भने भएको छैन ।’
मुख्य रूपमा पहिरोले असर गरेका ६ घरलाई ६ महिनाको घर भाडा दिएर अन्यत्र सारिएको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ आयोजनाका निर्देशक नरेशमान शाक्यले जानकारी दिए । पानी परेपछि पहिरो सफा गर्दै सडक चलाउने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘डाँडोको एकदमै ठाडो स्लोप छ,’ उनले भने, ‘३० डिग्रीभन्दा माथि स्लोप भयो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ भित्र चट्टान भएको र बाहिर माटो मात्र भएर समस्या भएको उनको भनाइ छ । वर्षा कम हुनासाथ उक्त ठाउँको भौगर्भिक अध्ययन हुने उनले बताए । ‘त्यसपछि माटोको अवस्था कस्तो छ, थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ड्रिलिङ मेसिन राख्न सकिएको छैन ।’
अहिले चौबीसै घण्टा कर्मचारी राखेर पहिरो आउनासाथ मनिटरिङ गर्ने गरिएको उनले बताए । ‘पहिरो गएर बीचमा बसेको माटो पानी पर्नासाथ झर्ने गरेको छ, ठूलो पहिरो भएर भने झर्दैन,’ शाक्यले भने, ‘लेदो बगेर सडकमा झर्ने गरेको छ, जसले डेढ सय मिटर सडकलाई असर गरेको छ ।’ पानी परेपछि पहिरोको समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘६ वटा घरलाई उक्त स्थानमा बस्न नमिलेको खण्डमा क्षतिपूर्ति दिएर सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिने उनले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा पहिरोको समाधान र ५ सय मिटर सडक कालोपत्र गरिनेछ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिकमा सुरुङ मार्गको शिलान्यास गरेका हुन् । ४२ महिनामा सक्नुपर्ने सुरुङको निर्माण थालेको २२ महिना भयो । निर्माणको जिम्मा जापानिज कम्पनी हाज्मा एन्डोले लिएको छ । अहिलेसम्म धादिङ र काठमाडौं दुवैतर्फ गरेर १२ सय ५० मिटर सुरुङ खनिसकिएको छ । आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत पुगेको छ ।
६ सय कामदार निर्माणस्थलमा खटिएका छन् । २.६८ किलोमिटर दूरी रहने सुरुङ निर्माणका लागि जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग छ । निर्माण ठेक्का भने साढे २२ अर्ब रुपैयाँको छ । यसमा ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ । अहिले नागढुंगादेखि सिस्नेखोलासम्म साढे ८ किमि दूरी छ  ।
प्रकाशित : भाद्र १६, २०७८ ०७:१९